Iplanethi iVenus: konke odinga ukukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iplanethi iVenus yiplanethi yesibili evela eLangeni kweyethu Uhlelo lomkhathi. Kungabonakala eMhlabeni njengento ekhanyayo esibhakabhakeni, ngemuva kweLanga neNyanga. Le planethi yaziwa ngegama lenkanyezi yokusa lapho ivela empumalanga ekuphumeni kwelanga nenkanyezi yakusihlwa lapho ibekwa entshonalanga ekushoneni kwelanga. Kule ndatshana sizogxila kuzo zonke izici zeVenus nomoya wayo ukuze ufunde kabanzi ngamaplanethi akuSolar System yethu.
Ngabe ufuna ukwazi konke mayelana neVenus? Qhubeka ufunde 🙂
1 Ukuqaphela iplanethi iVenus
4 Amafu nokwakheka kwawo
Ukuqaphela iplanethi iVenus
Ezikhathini zasendulo, inkanyezi yakusihlwa yayaziwa ngokuthi iHesperus nenkanyezi yasekuseni njengePhosphorus noma uLucifer. Lokhu kungenxa yamabanga aphakathi kwemizila yeVenus noMhlaba ukusuka eLangeni. Ngenxa yamabanga amakhulu, iVenus ayibonakali ngaphezu kwamahora amathathu ngaphambi kokuphuma kwelanga noma amahora amathathu emva kokushona kwelanga. Izazi zezinkanyezi zakudala zazicabanga ukuthi uVenus angaba yimizimba emibili ehlukene ngokuphelele.
Uma ibukwa ngesibonakude, iplanethi inezigaba ezinjengeNyanga. Lapho iVenus isesigabeni sayo esigcwele kungabonakala incane ngoba iseceleni elikude kakhulu neLanga eMhlabeni. Izinga lokukhanya okuphezulu lifinyelelwa lapho lisesigabeni esikhulayo.
Izigaba nezikhundla zeVenus esibhakabhakeni ziyaphindwa esikhathini seminyaka eyi-1,6. Izazi zezinkanyezi zibhekisela kule planethi njengeplanethi kadadewabo yoMhlaba. Lokhu kungenxa yokuthi ayafana ngosayizi, njengobukhulu, ubukhulu, nevolumu. Zombili zakhiwe ngaphezulu noma ngaphansi ngasikhathi sinye futhi zajiya kusuka ku-nebula efanayo. Konke lokhu kwenza UMhlaba noVenus bangamaplanethi afanayo.
Kucatshangwa ukuthi, uma kungaba sebangeni elifanayo ukusuka eLangeni, uVenus angabamba impilo njengoMhlaba. Ukuba kwenye indawo yeSolar System, sekuyiplanethi ehluke kakhulu kunale yethu.
IVenus yiplanethi engenazilwandle futhi izungezwe umoya osindayo kakhulu owakhiwe kakhulu yi-carbon dioxide futhi cishe awunawo umhwamuko wamanzi. Amafu akhiwa i-sulfuric acid. Phezulu siyahlangana ingcindezi yasemkhathini ephakeme izikhathi ezingama-92 kuneplanethi yethu. Lokhu kusho ukuthi umuntu ojwayelekile akakwazanga ukuhlala umzuzu ebusweni beplanethi.
Yaziwa nangokuthi iplanethi eshisayo, ngoba ingaphezulu linezinga lokushisa lama-482 degrees. La mazinga okushisa abangelwa ngumphumela omkhulu wokushisa okuveliswa umoya ominyene nosindayo. Uma kutholakala umphumela wokubamba ukushisa kwiplanethi yethu ukugcina ukushisa okunomkhathi omncane kakhulu, cabanga ngomphumela wokugcina ukushisa ozoba nawo emoyeni osindayo. Onke amagesi avaleleke emkhathini futhi awakwazi ukufinyelela esikhaleni. Lokhu kubangela ukuthi iVenus ishise kune iplanethi i-mercury yize kusondele iLanga.
Usuku e-Venusian inezinsuku ezingama-243 zomhlaba futhi yinde kunonyaka wayo wezinsuku ezingama-225. Lokhu kungenxa yokuthi iVenus ijikeleza ngendlela exakile. Ikwenza lokho kusuka empumalanga kuye entshonalanga, ngakolunye uhlangothi kuya emaplanethi. Kumuntu ophila kule planethi, wayekwazi ukubona ukuthi iLanga lizophuma kanjani entshonalanga bese lishona lizokwenzeka empumalanga.
Yonke iplanethi imbozwe amafu futhi inomoya ominyene. Izinga lokushisa eliphakeme lenza izifundo ezivela eMhlabeni zibe nzima. Cishe lonke ulwazi olutholakele ngeVenus lutholwe ngezimoto zasemkhathini ezikwazile ukwehla kulowo mkhathi ominyene ophethe ama-probe. Kusukela ngo-2013 Imishini engama-46 yenziwe kwiplanethi eshisayo ukuthola okuningi ngaye.
Umkhathi wakhiwa cishe ngokuphelele yisikhutha. Le gesi igesi enamandla abamba ukushisa ngenxa yekhono layo lokugcina ukushisa. Ngakho-ke, amagesi asemkhathini awakwazi ukufudukela esikhaleni futhi adedele ukushisa okuqongelelwe. Isisekelo samafu singama-50 km ukusuka ebusweni futhi izinhlayiya ezikulamafu ikakhulukazi zigxile ku-acid ye-sulfuric acid. Iplanethi ayinamandla kazibuthe abonakalayo.
Ukuthi cishe i-97% yomkhathi yakhiwe nge-CO2 akumangalisi kangako. Futhi ukuthi uqweqwe lomhlaba walo lunenani elilinganayo kodwa ngesimo selimestone. Kuphela u-3% womkhathi yi-nitrogen. Umhwamuko wamanzi namanzi yizinto ezingavamile kakhulu kuVenus. Ososayensi abaningi basebenzisa impikiswano yokuthi, ukusondelana neLanga, kungaphansi kwethonya elinamandla kakhulu lokushisa okuholela ekuhwamukeni kwezilwandle. Ama-athomu e-hydrogen kuma-molecule wamanzi abengalahleka esikhaleni nakuma-athomu e-oksijeni kuqweqwe.
Okunye okungenzeka kucatshangwe ukuthi iVenus ibinamanzi amancane kakhulu kusukela ekuqaleni kokwakhiwa kwayo.
Amafu nokwakheka kwawo
I-sulfuric acid etholakala emafini nayo iyafana naleyo esemhlabeni. Iyakwazi ukwakha inkungu enhle kakhulu ku-stratosphere. I-acid iwela emvuleni bese iphendula ngezinto ezingaphezulu. Lokhu kwiplanethi yethu kubizwa ngemvula ene-asidi futhi kuyimbangela yokulimala okuningi ezindaweni zemvelo njengamahlathi.
KuVenus, i-asidi iyahwamuka ngaphansi kwamafu futhi ayidluli, kepha ihlala emkhathini. Isihloko se amafu ayabonakala eMhlabeni nakuPioneer Venus 1. Ungabona ukuthi isakazeka kanjani njenge haze amakhilomitha angama-70 noma angama-80 ngaphezulu kobuso beplanethi. Amafu aqukethe ukungcola okuphuzi okukhanyayo futhi atholakala kangcono kuma-wavelengths aseduze ne-ultraviolet.
Ukwehluka okukhona kokuqukethwe yi-sulfur dioxide emkhathini kungakhombisa uhlobo oluthile lwentaba-mlilo esebenzayo emhlabeni. Ezindaweni lapho kunokuhlushwa okukhulu khona, kungahle kube nentabamlilo esebenzayo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nenye iplanethi kuSolar System.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Iplanethi iVenus